जलवायु सम्झौता: एक राम्रो जैकेट मा मान्छे चोरी: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
जलवायु सम्झौता: एक राम्रो जैकेट मा मान्छे चोरी
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	29 जून 2019 मा	• 19 टिप्पणिहरु
तपाईं बस मा हँसिनु पर्छ sophistication जसमा मानिसहरू 'जलवायु सम्झौताको' नाममा लुटिएका छन्। खासगरी नयाँ भाषणले विशेष रूपमा चुनेको छ। यो तपाईं कसरी गर्छौं: ,,,हामी सबैलाई भाग लिन को लागी जाँदै हुनुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि चीजहरू परिवर्तन हुने छैनन्। तर ती परिवर्तनहरूको लागि हामी 30 बर्ष छ, एक पीढी। ''
सबै चीज वरिपरि ओरेवेलियन समाचारहरूमा बदलिन्छ। यसका उदाहरणहरू: अनिवार्य स्वैच्छिकर, शान्ति मिशन (युद्धमा सेना पठाउँदै), मानसिक स्वास्थ्य हेरविचार (कैद र औषधि प्रशासन) र धेरै अन्य। तर यो बयान एक शानदार तरिका ओल्डवेलियन बयान पनि छ: "हामी सबैलाई बहकाउन जाँदैछौं"। अभ्यासमा जुनसुकै तरिकाको रूपमा:हामी सबैलाई दण्ड दिइरहेका छौं जसले भाग लिन सक्दैन.
हामी त्यस पछि पछि हेरौं AD को लेख:
यद्यपि जलवायु सम्झौताको उद्देश्य 2030 मा भन्दा ग्यारह वर्षमा2मा लगभग कम्क्सको धेरै CO1990 लाई उत्सर्जन गर्न मिल्छ। यस अन्तमा, क्याबिनेटले उपायहरूको सूची प्रस्तुत गर्नेछ, जस्तै गैसको मूल्यमा वृद्धि र बिजुलीको कमी। त्यहाँ गर्मीको पंपहरूको लागि सब्सिडी र ऋण र घरको इन्सुलेशन पनि हुनेछ।
तर वास्तवमा सबै कुरा हेर्नु हुनेछ कसरी आउनु पर्नेछ। अब क्याबिनेटले मुख्यतया सान्त्वनात्मक शब्दहरूको लागि चयन गर्दैछ। उदाहरणका लागि, महासचिव काजु ओल्लेनन (लाइभ) भन्छन् कि सबै आफैले निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ भने उनीहरूले आफ्नो घरको साथ के गर्न चाहन्छन्। , जो केहि साना परिवर्तनहरू गर्न चाहने व्यक्तिहरूले छोटो अवधिमा यो बारेमा सल्लाह पाउन सक्छन्। यो हुन सक्छ कि तपाईं आफ्नो बलरलाई अझ राम्रो समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ। "
Ollongren घर को मालिकहरु ले लिनु पर्ने प्रमुख झटका बारेमा अधिक सतर्क छ - आफ्नो घर इन्सुलेट गरेर वा ग्याँसबाट छुटेर। , के तपाईंको छत राम्रो तरिकाले अशुद्ध छैन? त्यसोभए तपाईले यसको लागि सब्सिडी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। "" तर कति सब्सिडी र कस्ता परिस्थितिहरूमा प्रश्न चिन्ह रहन्छ।
यो स्पष्ट छ कि एक राष्ट्रिय गर्मी कोष हुनेछ जसबाट मानिसहरूले आफ्नो 25.000 यूरोसम्म उधार लिन सक्छन् आफ्नो घर अझ बढी स्थायी बनाउन। जो कोही यस्तो रकम को उधारो गर्न वा आफ्नो जेब बाहिर यो लगानी को लागी तिर्न चाहँदैनन्, केहि वर्षको समयमा बढ्दो ग्यास करको कारण धेरै खर्च हुनेछ।
वैसे पनि यो एक प्रमुख नवीकरण संग 2021 को अन्त सम्म प्रतीक्षा गर्न स्मार्ट लाग््छ। त्यसपछि सबै नगरपालिकाहरूले पड़ोसमा ऊर्जा आपूर्तिको लागि एक योजना बनाएको हुनुपर्छ। हीट सञ्जालहरू विशेष गरी ठूला शहरहरूमा स्थापित हुनेछन्। यसको लागि जोडिने घरहरूको लागि, बयलरले घर छोड्न सक्छ। ओलङ्गेनन भन्छिन् "तपाईलाई अहिले केहि पनि आवश्यक छैन"।
यसैले पहिलो अनुच्छेदले बताउँछ कि ग्याँसको मूल्य माथि बढ्दै गएको छ र बिजुलीको मूल्य बढ्दै गएको छ। यदि हामी यथार्थवादी छौं भने तपाईं ग्याँस उपकरणहरू बिजुलीमा स्विच गर्न पुन: नविकरण गर्न आवश्यक छ। त्यसो भए तपाईले जे भए पनि पैसा र यदि, उदाहरणका लागि, ग्यासले 90% बढ्छ र बिजुली मात्र 1% घटाउँछ, तपाईले एक जनाको रूपमा झूठ बोल्नुभएको छैन, तर सन्तुलनमा सबैले अझै पनि गुमाएका छन्। यदि, यसको अलावा, बिजुली को दक्षता, उदाहरण को लागि, घर को ताप को कम छ, त तपाईं को लागि अधिक बिजुली को खरीद हुनेछ र संतुलन मा तपाईं पनि अधिक गुमाउनु पर्छ।
दोस्रो अनुच्छेदले एक सल्लाहकार भागेको दायित्वको संकेत समावेश गर्दछ जसले आवश्यक परिवर्तनको लागि तपाईंको घरको मूल्यांकन गर्नेछ। तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि यो पैसा खर्च हुनेछ र यो यस्तो आधिकारिक रिपोर्ट तयार गर्न अनिवार्य हुनेछ। कैश रजिस्टर!
तेस्रो अनुच्छेदमा, रक्तचापको लागि कपडा पहिले नै अनुदानको रूपमा प्रस्तावित छ। तथापि, हामी पहिले नै मान्न सक्दछ कि सब्सिडी मात्र परिवर्तन हुने सम्भावनाहरूको लागतको भाग बसाल्नेछ (तपाईले आवश्यक अनिवार्य ऊर्जा सल्लाहकारलाई नियुक्त गरेको छ जुन तपाईले केही अनिवार्य परिवर्तनहरू गर्नुहुनेछ)।
त्यस पछि, कर पैसाको एक ठूलो बर्तन एक राष्ट्रिय गर्मी कोष को लागि आरक्षित गरिएको छ जसबाट मानिसहरूले यी लागू भएका परिवर्तनहरू लागू गर्न पैसा लिन सक्छन्। बेशक, एक निश्चित ब्याज दर मा एक ऋण हुनेछ, र यो कसरी मान्छे आफ्नो गले मा फेंकिएको छ: "तपाईं परिवर्तन गर्न जरूरी छैन, तर तपाईंको कर काफी वृद्धि हुनेछ। यदि तपाई परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईसँग आधिकारिक रिपोर्ट तयार हुनुपर्छ र तपाईं सानो सब्सिडी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तर सबै भन्दा माथि धेरै पैसा उधार"। छोटो समयमा, मानिसहरू कर्जामा थप तिर्न बाध्य हुन्छन् र उनीहरूको बायाँ वा दाँया तिर्न पर्छ। जसबाट भीड द्वारा।
ड्राइभिङ क्षेत्रमा, सबै चीजहरू अधिक महसुस गरिन्छ र परिवर्तन गरियो। एक क्षणको लागि मात्र पढ्नुहोस्:
सरकारले डचलाई बिजुली कारहरुमा स्विच गर्न चाहान्छ। त्यो पनि दोस्रो-अर्का हुन सक्छ, जसको लागि अनुकूल सब्सिडी योजनाहरू छन्। मूल जलवायु योजनाहरु मा, 6000 यूरो को खरीद सब्सिडी नयाँ प्लग-इन कारहरुमा लागू हुनेछ, तर कि सब्सिडी रद्द गरिएको छ।
नयाँ खरिद सब्सिडी 'दृढ हुनुपर्छ', जलवायु जलवायु सम्झौता अब बताउँछ। छोटोमा: ती व्यक्तिहरू जसले आगामी वर्षहरूमा प्लग-इन कार किन्न चाहानुहुन्छ, यो थाहा छैन कि यो हुन सक्छ। त्यो राशि 6000 यूरो भन्दा धेरै कम हुनेछ, निश्चित हुन जस्तो देखिन्छ।
यहाँ पनि, सरकार भन्छन् कि डच मान्छे आफ्नो पेट्रोल वा डीजल कार निषेध गर्न बाध्य छैन। होइन, यो आवश्यक छैन, तर यसले केहि मोटरसाइकलहरू अतिरिक्त पैसा खर्च गर्दछ। किनकी डीजल मा उत्पाद शुल्क बढाने को आने वाला तीन वर्ष मा कदम देखि कदम हुनेछ।
नयाँ खरीद सब्सिडी थप निर्दिष्ट गरिएको छ। छोटोमा: "तपाईलाई थाहा छैन कि तपाई यस्तो कार किन्न चाहानुहुन्छ, तर यो अनिवार्य हुन्छ"। खैर, तपाईसँग अझै पनि पेट्रोल वा डीजल चलाउने छनौट छ, तर त्यसपछि तपाई जानुहोस् राम्रो धेरै अधिक तिर्नुहोस्। निस्सन्देह, धेरै भुक्तानी "चरण" मा हुन्छ, जसको हामी सबैले सोच्न सक्दछ कि यो सात-माइल जूता हुनेछ।
छोटोमा, तपाईं गत वर्ष मात्र CO2 जलवायु चापको साथ खेल्नुभएको छ केवल एक स्पष्ट कारणको साथ: एक व्यक्तिलाई पनि धेरै पैसाहरू चोरी गर्न सक्षम हुन.
यो उल्लेखनीय छ कि मौसम सम्झौताको घोषणा एक हप्तामा आउँछ जुन जूनको सबैभन्दा धेरै दिनहरू युरोपभरिको लामो समयसम्म बोलेको छ। हामी मौसम प्रभाव पार्न आवश्यक प्रविधिको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौं। तीमध्ये धेरैले 'साजिश सिद्धान्त' को आलोचना गर्दैनन्।
ती सबूतहरू जुन सबै ऊर्जा परिवर्तनहरूको सकारात्मक प्रभाव देखाउँछन्? उदाहरणका लागि, बिजुलीका लागि ब्याट्रीहरूको उत्पादन वातावरणको लागि एक ठूलो आपदा हो, र बिजुलीबाट बिजुलीको स्विचमा धेरै क्षमताहरू छन्। र सबै प्रकार को इन्सुलेशन सामाग्री को उत्पादन को पर्यावरणीय प्रभाव के हो?
हामी एक पटक फेरि अद्भुत उदाहरण देखिरहेका छौं 'समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान', जहाँ मेडिया र राजनीतिमा आत्म-निर्मित समस्या सम्भव छ; मानिसहरू बीचको प्रतिक्रिया एउटै प्रचार मिसिन द्वारा ईन्टरनेट गरिएको छ; त्यसपछि तब (धेरै महंगा) समाधान को मान्छे को गले को माध्यम ले धक्का।
CO2 वातावरणमा एक आवश्यक अवयव हो जुन पेड र बिरुवाहरु द्वारा ओक्सीजन बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यो वातावरणमा यस्तो हानिकारक मात्रामा छ जुन यो हानिकारक हो र CO2 ज्ञात माप मानहरूमा वृद्धि हुन्छ (यस मापको अवधिमा छोटो समयबाट), बरु एक परिणाम सौर गतिविधि बढ्यो एक कारण भन्दा ग्लोबल वार्मिंग। तपाईंले आवश्यक अनुसन्धान गरेर यो पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। यद्यपि, इन्टरनेशनल जानबूझेर निर्मित डिफिनोफोको भरी भरी भएको छ कि मिडियाले तपाईंलाई नकली समाचारको झूटो बिरोधको माध्यमबाट फिर्ता लिने प्रयास गरिरहेको छ र भ्रम छ कि उनी अझै पनि सत्य बोल्दैछन्। अहिले नियन्त्रणमा रहेका विपक्षीहरूले सुरक्षा नेटको रूपमा सेवा गर्छन्। एक पटक जब विपक्षी सुरक्षा नेट जहाज माछा माछा पकडिएको हुन्छ, त्यो जहाज बिस्तारै छ र डूबिंग व्यक्तिहरु लाई मुख्यधारा मिडिया र पुरानो राजनीतिक आदेश बोर्डमा उचाल्दै छ।
यसैले यदि तपाईं मौसमको सम्झौताको बारेमा सन्देश जस्तै गुस्सा पाउनुहुन्छ भने, सम्झनुहोस् कि तपाइँ अब माथिबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्नुपर्दैन। द हेग र ब्रुसेल्समा चुरोट गिरोहहरू तपाईंलाई मदत गर्न होइनन्। तिनीहरू बायाँ र दायाँ, रूढ़िवादी र विरोधको खेलको माध्यमबाट मात्र लोकतान्त्रिक रूप खेल्छन्। त्यसैले तपाईलाई परिवर्तन गर्न र कार्य लिनु पर्छ। पढ्नुहोस् यहाँ कसरी.
PowNed दृश्य मा Poelenburgse vloggersrel राखी अभिनेता, एक्स्ट्रास र डाइरेक्टिंग संग
ट्याग: विशेष, Kasje, जलवायु सम्झौता, उधार लिनु, ऋण, minister, राष्ट्रिय, Ollongren, गर्मी कोष
Jaline Bies लेखे:
29 जून 2019 मा 13: 20
यदि मैले एक चाललाई सुनेको छु भने, हामी कर लगाउन सक्छौं र त्यसपछि भुक्तानी कर पैसा उधारो गर्न सक्दछौं, हम्म पनि तार्किक आवाजहरू लगाउँछन्।
उनीहरु र कैबिनेट प्रत्येक हप्ता को लागी बेपत्ता छन्। यदि तपाईंले सबै कुरा सुन्नुभएको जस्तो लाग्छ भने, तिनीहरूले केहि नयाँ बनाएका छन्।
यसको अतिरिक्त, राज्य कारहरु जसलाई उनीहरूलाई ड्राइभ गर्न अनुमति दिइएको हो पहिले देखि नै पूर्णतया बिजुली छन्, के उनीहरूको घरको वातावरणमा पूर्णता भएको प्रमाण छ?
29 जून 2019 मा 13: 53
Euthanasia कानुन को आराम संग हामी हामी सीएक्सएनमक्स उत्सर्जन को कम गर्न सक्छन्। र संगठनको कटाईमा D2 विधानको लागि धन्यबाद, यो पनि एक स्थायी पत्थर संग दुई पक्षी हो।
29 जून 2019 मा 14: 00
..तपाईँले पहिले नै राम्रो वातावरणमा योगदान गर्न सरोकारको आदेश दिएका छन्, किनकि एक राम्रो वातावरण तपाईसँग सुरु हुन्छ
"जसमा तपाईं कुनै पनि स्थानमा शान्तिपूर्वक पर्ची गर्न सक्नुहुन्छ"
29 जून 2019 मा 16: 15
वास्तवमा राइफियन यो 'प्रकृति संरक्षण' को हिसाबमा एक छुटकारा दिइएका एजेंडा हो, तर हाँ, जानुहोस् र औसत माधुरमोम निवासीलाई समझाओ ..
29 जून 2019 मा 18: 05
यदि तपाईं यसलाई व्याख्या गर्नुभयो भने, साधारण व्यक्तिहरूले यो विश्वास गर्दैनन्। त्यो उनीहरूको चकित छनौट हो!
आह, आज तिनीहरू यस गर्मीमा समुद्र तटमा बसिरहेका छन्। सूर्य चमकिएको छ, बियर सस्तो छ, गर्मीको सुरु भयो। पुरुष, महिला आदि एक-अर्काको लागि शिकार गर्न सक्छन्।
त्यसपछि कसले जीवन बिताउनुहुन्छ? ओह जबसम्म दुश्मन आप्रवासी कुलीनले प्यानमा आगोलाई सुस्त तुल्याउँदछ, साधारण जनसंख्या योमा सिमा राख्छ।
जलवायु सम्झौता एक निश्चित व्यापार बाधा हो किनकी यूनियन गरीब देशहरु मा भाग लिन को लागी यो प्रश्न छ कि उनि यसलाई बर्दाश्त गर्न सक्छन् या नहीं। त्यसैले तिनीहरू वास्तवमा ISO मानक हुन्। ईयू देशहरूको बीचमा 'नि: शुल्क' प्रतियोगिता लामो समयसम्म रहन, किनकि यो अवस्थित छैन।
29 जून 2019 मा 19: 56
र फेरि फेरि नियन्त्रणमा राखिएको प्याट्रिक मौर, डबल डिलमा, पहिलो सेटले उहाँले एलएचटीटीक लोगो ग्रीनपेसलाई केहि तथाकथित हरियो पत्रकारहरूलाई साथ बनाउनुहुन्छ, र त्यसपछि उसले ग्रीनपेसको विरुद्धमा नियन्त्रणको विरोध गर्न सक्दछ, यो कसरी चाँडै चालाक हो।
पैट्रिक मूरले मालिकलाई नियन्त्रणमा राखेको व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्छ
र यहाँ जर्मन जसले आफ्नो इंद्रधनुष लोगोको साथ ठूलो मात्रामा सबैलाई झूट बोलायो,
यो एक लामो ढिलो एजेन्डा छ जुन हामी अचेल देख्न सक्छौं।
29 जून 2019 मा 22: 19
खैर, "जर्मन"। त्यो तिनीहरूको लुगा राष्ट्र राष्ट्र हो।
29 जून 2019 मा 23: 08
इंद्रधनुष लोगो कबाबल, फ्रीमोसोरी / नयाँ युगको अप्रत्यक्ष सन्दर्भ हो यसको यसको विवेक उत्पत्ति। त्यसैले यो बाबुलियन यहूदी रहस्यमय सिद्धान्त हो जसले संसारभरि सबैलाई धक्का दिन्छ।
राष्ट्रको लागि कबल र ध्यान
29 जून 2019 मा 23: 15
पहिलो दस्तावेजित इंद्रधनुष नूहको बाइबलीय कथामा छ, जसले बाढीलाई बचाउँदछ जसले संसारको जनसंख्यालाई आफ्नो अपराधको कारण नष्ट गर्यो। इंद्रधनुष - "बादलहरूमा मेरो इन्धन" - जीड र "सबै जीवित प्राणीहरू" बीचको करारको रूपमा कार्य गर्दछ, बाढीले आफ्नो पापको बावजुद बाढी कहिल्यै संसारलाई नष्ट नगर्न आफ्नो प्रतिज्ञाको जीडी सम्झाउँछ। किन इन्द्रधनुष? इन्द्रधनुषको बारेमा के हो र यसले शान्तिको चिन्ह बनाउँछ?
एक अधिनियम जो एक कानून, नियम, या आचार संहिता को बिरुद्ध जान्छ; एक अपराध।
म अर्को अपराधहरूको लागि आँखा राख्नेछु (एक आँखा प्रतीक)
LGBTQ एजेन्डाको कारण "पापको माध्यमबाट छुटकारा" को एक महत्त्वपूर्ण भाग हो।
30 जून 2019 मा 14: 44
यहाँ सामान्य संदिग्धहरूको संसारको बारेमा अझ राम्रो वृत्तचित्र र यसलाई कसरी राजतन्त्रको साथमा जोडिएको छ।
30 जून 2019 मा 16: 33
दोषी भावना बुझाइयो ..
30 जून 2019 मा 16: 43
7 जुलाई 2019 मा 11: 23
गहिरो डच स्क्रिप्टका केटाहरु द्वारा गरे दासत्व को लागि पूर्ण मुआवजा कब प्राप्त गर्दछ? निस्सन्देह लिपिको केटाहरु र सामान्य जनसंख्या को खर्च मा। जब एक आप्रवासी वकीलले बलियो मानवीय मानव अधिकार उल्लङ्घनका लागि मुआवजाको लागि लड्नको लागि बलियो बनाउँछ, त्यहाँ कुनै नुस्खा वा लिपिका केटाहरू निश्चित छन् कि लिपिहरूका केटाहरू यो निर्धारित गर्दछ। त्यो आप्रवासी वकील दुर्भाग्यवश खडा हुनेछैन, वकीलहरु को आदेश बाट बाहिर निस्कने डरलाग्दो हुनेछ। र सम्भवतया सही काम गर्नु भन्दा उनको स्थिति अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ।
"विद्रोह" भनेको छ कि केटाकेटीहरूको सन्तानले आफैलाई गाढा डचको चैंपियनको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। हो, तिनीहरू चाँडै खेलिरहेका छन् उनीहरूले तिनीहरूलाई अग्लो बनाइदिए र उनलाई राम्रो कमाई दिए र अब 'प्रोसेसर' भनिन्छ। मदुरोमम मा हरेक नीति मा तपाईं यस रणनीति को प्रतिबिंबित गर्छन। र साधारण मानिसहरू ती खराब खेलहरू लिन्छन्।
सेतो खरगोश लेखे:
30 जून 2019 मा 17: 28
धेरै राम्रो लेख, सबै उपायहरूसँग CO2 उत्सर्जनहरू कम भएन तर चीन जस्ता अन्य देशहरूमा सारियो। बिजुली कारहरुको उत्पादनबाट अतिरिक्त CO2 उत्सर्जनको बारेमा कुनै पनि कुरा, कुनै पनि बायोमास संयंत्रको कारण पेड गिरने बारे कुरा गर्दैन। तिनीहरूले निश्चित रूपमा CO2 उत्पादन गर्दछ, तर त्यो समावेश छैन।
र त्यसपछि हामी अझै पूर्ण चक्रको क्षमताको बारेमा कुरा गर्दै छैनौँ।
भर्खरै म घरको बिजुली स्थापना सँग व्यस्त थिएँ जुन ऊर्जा संक्रमणको लागि तैयार हुनुपर्छ। तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाईलाई 3A को लागी 40x 25Ampere चाहानुहुने खडा चार्ज हुन्छ,
जो कोही सबैको गणना गर्छ र खातामा सबै कुरा लिन्छ त्यो पत्ता लगाउँदछ कि CO2 उत्सर्जन कम गर्नुको सट्टा बढ्दै जान्छ, त्यसैले जलवायु सम्झौता धेरै अविश्वसनीय छ।
यो उपायहरूको मात्र फाइदा अर्थव्यवस्थाको उत्तेजना हो, जुन सामान्य नागरिकहरूको लागि कुनै प्रयोग छैन।
1 जुलाई 2019 मा 00: 33
र सोच्नु होस् कि जर्मनी र फ्रान्समा तपाईले सब्सिडी पाउनुहुनेछ भने तपाईले ग्याँस स्विच गर्नुहुनेछ। त्यहाँ त्यहाँ त्यहाँ फरक ग्यास हुनेछ? दाँया ...
र ... नेदरल्याण्ड्समा ग्याँसबाट, के उसले ग्रोनेन्सनमा ड्रिलिङ रोक्न सक्नेछ वा यो पर्याप्त डेलिभर हुनेछैन?
निष्कर्ष: केही मानिसहरू धेरै धनी हुन्छन् र भीडले तिर्नेछ ...
5 जुलाई 2019 मा 14: 58
कोको फ्लान्ल लेखे:
24 जुलाई 2019 मा 18: 19
डच तहमा भरने थलहरू निश्चित लक्ष्य होइन। त्यो प्रलोभनको प्रस्ताव छ जुन उद्यमीहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्छ र यसैले जलवायुको धर्मलाई बलियो बनाउँछ र यो मानिसहरु र विशेष गरी नयाँ पीढी बीच फैलिएको छ। डच राजनेताहरू पनि धेरै सानो, विश्वव्यापी वातावरण चर्चको निचला भाग धेरै ईमानदार विश्वासीहरूका साथ छन्।
उच्च स्तरमा (नेदरल्यान्डको डवलिभर बौने देश भन्दा माथि) समाजलाई छिट्टै छिटो परिवर्तन गर्न को लागी विश्वव्यापी रूपमा प्रविधि नियन्त्रण-नियन्त्रण समाजमा बदल्न, टेक्नोलोजी कम कमपट्टिहरू ("हामी तपाईँलाई टेक्नोलोजी र हस्तक्षेपमा हात हाल्नु पर्छ" टेक-निर्धारित गरिएको सौंदर्यशास्त्रको साथमा जोडिनु पर्छ)। यो वास्तविक ठूलो धनको पक्षमा, वास्तविक शक्ति।
25 जुलाई 2019 मा 10: 55
सिफारिस पुस्तकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
र घटेको संगठनको सन्दर्भमा, यहाँ लन्डनमा सिविलिआमवादको एक राम्रो टुक्रा हो
यी सबै संगठनहरू अचानक देखि कहाँ आउँछन्
24 जुलाई 2019 मा 18: 40
म Nikos Salingaros पुस्तक को सिफारिश को विरोधी वास्तुकला (वहाँ इंटरनेट मा कहीं एक मुफ्त संस्करण भी है), यह सौंदर्यशास्त्र के माध्यम से शक्ति का खेल मैदान है। जलवायु चर्च पारिस्थितिकी आदर्शवाद / नैतिकतावादको पक्षमा छ, सौंदर्यशास्त्र, प्राविधिक द्वारा उत्पन्न जेनेटिक बिजुलीको अर्को प्रमुख खेत हो, वास्तुकलासँग सीमित छैन, तर वास्तुकला मौलिक र शक्तिशाली छ (आधुनिकतावादको चर्च हेर्नुहोस्, नव-आधुनिकतावाद / पोस्ट-आधुनिकतावाद र डेकोनस्ट्रक्टिभिभ्म) यसैले शक्ति प्रतीकहरूको लागि अर्थ र मानव मनलाई नियन्त्रण गर्न को लागी साधनहरू ...
जलवायु चर्च नैतिकता र अस्तित्व को लागी अपील गर्दछ, सौंदर्यशास्त्र को माध्यम ले लापरवाही, एक धेरै शक्तिशाली साधनहरु को माध्यम ले हो, र यसैले सबै सम्भावित क्षेत्रहरुमा अत्यन्तै शोषण गरिनु पर्छ।
« Deepfakes तिनीहरू के हुन् र त्यो लामो समयसम्म यो घटना भएको छ?
नगदको उन्मूलन र जनताको कुल नियन्त्रणको लागि आदर्श अलबाय अपराध »
कुल भ्रमण: 49.245
क्यामेरा2op के ब्रिडेट मासल्याण्डले मार्टिन भ्रिजल्याण्डलाई धोका दिईरहेकोले एन्ड्री हेज भ break्ग भयो?
मार्टिन भिजल्याण्ड op रसियाली बमवर्षकहरूले सिरियामा टर्कीको बख्तरबन्द गाडीहरू नष्ट गरे, अवस्था तीब्र भयो